Video:-Maxkamada Ciidamada Muqdisho oo lasoo taagay xubno ka tirsan Daacishta Somaliya – Idil News
Video:-Maxkamada Ciidamada Muqdisho oo lasoo taagay xubno ka tirsan Daacishta Somaliya
Maxkamadda Darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta la soo taagay Horjoogayaal ka tirsan Kooxda Daacish-ta Soomaaliya.
Horjoogayaasha Maxkamadda la soo taagay ayaa lagu kala magacaabay Mahad Maxamuud Cabdi oo loo yaqaano (Abtidoon, Abuu-yaasiin) iyo Maxamed Daa’uud Daahir Warsame oo isagana loo yaqaanno (Dr. Raage).
Mahad Maxamuud Cabdi ayaa Xafiisk Xeer Ilaalinta ku soo eedeeyay inuu dadaal ugu jiray sidii uu aas-aasi lahaa koox kale oo Daacish ah, kuwaasoo ka madax banaan kooxda Daacishta ah ee uu hoggaamiyo Sheekh C/qaadir Muumin.
Safar dheer ayuu u soo galay sidii uu Soomaaliya ku soo gaari lahaa, waxaana uu heysta dhalashada Ruushka oo uu muddo ku noolaa, waxaa sidoo kale uu ku soo qaatay qeyb ka mid ah noloshiisa waddanka Syria, isagoo ugu dambeyn ku biiray kooxda Daacish uu ka mid noqday kuwa ugu sarreeyo, balse mar dambe oo ay is qabteen hor-joogaha kooxda Daacish ayuu go’aansaday inuu aas-aaso koox kale.
Wax yaabaha gaarka ah oo ay xafiiska xeer ilaalinta soo bandhigeen waxaa ka mid ah warqad uu u qoray horjoogaha ugu sarreeyo kooxda Daacish, taasi oo uu ku gudbinayay cabashada ay ka wadaan horjooge C/qaadir Muumin, wax yaabaha ku qornaa waxaa ka mid ah;-
“Hoggaan xumida hoggaamiyaha kooxda, Qorsha la’aanta howlahooda iyo Howl-galladooda, ku baahid la’aanta dhul ballaaran sida Koonfurta Soomaaliya iyo arrimo kale”
Sidoo kale Maxamed Daa’uud Daahir Warsame oo magiciisa Af-garashada uu yahay (Dr. Raage) ayaa isna lagu eedeeyay in uu ahaa madaxa maaliyadda kooxda, sidoo kale ahaa caawiye xagga caafimaadka ah ayaa cadeymaha Maxkamadda lala keenay waxaa ka mid ahaa Akoonada Lacageed ee uu isticmaalay iyo shirakidihii uu ka isticmaali jiray Lacagaha.
Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka Sida G/sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo xiray fadhiga Maxkamadda, waxaana uu sheegay dhammaan ka qeyb-galayaasha in Maxkamadda ay go’aanka dib ka soo saari doonaan.
Horjoogayaashan oo aan aheyn dad dhallinyaro lamarin habaabiyey ayaa doonayey in ay maskaxda dhallinyaro Soomaaliyeed lumiyaan si ay ugu adeeggaan argagixiso aan arxan iyo aragti toona lahayn,hoos ka daawo muuqaalka.